သတင်း - ကတ်ပုံပုံးချုံ့စက်၏ အဖြစ်များသော ချို့ယွင်းချက်များနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း။
ကတ်တွန်ချုံ့စက်၏ အဖြစ်များသော ချို့ယွင်းချက်များအား ဖြေရှင်းခြင်း။
ကတ်တွန်ချုံ့စက်တွင် အဖြစ်များသော ချို့ယွင်းချက်များနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနည်းလမ်းများ- ကွန်ပြူတာ display panel တွင် မကြာခဏပြသထားသော စက်ချို့ယွင်းချက်များ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် ကွန်ပျူတာချို့ယွင်းချက်များကို သေချာပေါက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်၊ အသေးစိတ်တိုင်းကို ဂရုတစိုက် အာရုံစိုက်သင့်သည်၊ နောက်ဆုံးပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းအတွက် အချက်အလက်များစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်စေရန်၊ ဖြစ်နိုင်သည်။
အောက်ပါ ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းများကို ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်သင့်သည်-
မကြာခဏဆိုသလို ဆော့ဖ်ဝဲ ပျက်ကျသည်-
ကွန်ပျူတာ Hardware ချို့ယွင်းခြင်း။ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ကွန်ပျူတာကို ပြုပြင်ပါ။ဆော့ဖ်ဝဲ ချို့ယွင်းပါက ထုတ်လုပ်သူထံ ဆက်သွယ်ပါ။ဖိုင်လည်ပတ်နေစဉ်တွင် ဤအခြေအနေသည် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရှိမရှိဖိုင်လည်ပတ်မှုတွင် အမှားအယွင်းတစ်ခုရှိနေသည်။ဖြည်ထားသောဖိုင်တွင် ပြဿနာရှိနေသည်။အခန်းတစ်ခန်းချင်းစီရှိ သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်း လည်ပတ်မှုလမ်းညွှန်ချက်များကို ကိုးကားပါ။
2. စမ်းသပ်မှု အင်အား သုည ရှုပ်ထွေးမှုကို ပြသသည်-
အမှားရှာပြင်နေစဉ် ထုတ်လုပ်သူမှ တပ်ဆင်ထားသည့် မြေစိုက်ဝိုင်ယာ (တစ်ခါတစ်ရံ မဟုတ်ပါ) ကို စစ်ဆေးပါ။ပတ်ဝန်းကျင်က အရမ်းပြောင်းလဲသွားတယ်။စမ်းသပ်စက်သည် ထင်ရှားသော လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလုပ်လုပ်သင့်သည်။ပတ်ဝန်းကျင်၏ အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆများလည်း လိုအပ်ပါသည်။အိမ်ရှင်လက်စွဲကို ကျေးဇူးပြု၍ ကိုးကားပါ။
3. စမ်းသပ်မှုအင်အားသည် အမြင့်ဆုံးကိုသာ ပြသသည်-
ခလုတ်ကို ဖိထားခြင်း ရှိမရှိ ချိန်ညှိပါ။ချိတ်ဆက်မှုများကို စစ်ဆေးပါ။ရွေးချယ်မှုများရှိ AD ကတ်ဖွဲ့စည်းပုံအား ပြောင်းလဲခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။အသံချဲ့စက် ပျက်စီးသွားသည်၊ ထုတ်လုပ်သူထံ ဆက်သွယ်ပါ။
4. သိမ်းဆည်းထားသောဖိုင်ကို ရှာမတွေ့ပါ-
ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွင် သိမ်းဆည်းသည့်အခါ အခြားသော တိုးချဲ့မှုတစ်ခုကို ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်စေ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွင် ပုံသေပုံစံဖိုင် extension တစ်ခုရှိသည်။သိမ်းဆည်းထားသော လမ်းညွှန်ကို ပြောင်းထားသလား။
5. ဆော့ဖ်ဝဲကို စတင်မရနိုင်ပါ-
ဆော့ဖ်ဝဲ dongle ကို ကွန်ပျူတာ အပြိုင်အပေါက်တွင် ထည့်သွင်းထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။အခြားဆော့ဖ်ဝဲပရိုဂရမ်များကိုပိတ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်စတင်ပါ။ဤဆော့ဖ်ဝဲ၏ စနစ်ဖိုင် ပျောက်ဆုံးသွားပြီး ပြန်လည်ထည့်သွင်းသင့်သည်။ဤဆော့ဖ်ဝဲ၏ စနစ်ဖိုင် ပျက်စီးသွားပြီး ပြန်လည်ထည့်သွင်းသင့်သည်။ထုတ်လုပ်သူထံ ဆက်သွယ်ပါ။
6. ပရင်တာသည် ပရင့်ထုတ်ခြင်းမရှိပါ-
လုပ်ဆောင်ချက်မှန်ကန်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးရန် ပရင်တာ ညွှန်ကြားချက်များကို စစ်ဆေးပါ။မှန်ကန်သော ပရင်တာကို ရွေးမလား။
7. အခြားထုတ်လုပ်သူများထံ အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခု ပြုလုပ်ပါ။
Carton compression machine သည် နိုင်ငံတော် စံနှုန်းသစ်အရ သုတေသနပြု၍ တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသော တူရိယာအမျိုးအစားသစ်ဖြစ်ပါသည်။တူရိယာတွင် အဓိကအားဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက်သုံးမျိုးရှိသည်- ဖိသိပ်မှုအားစမ်းသပ်မှု၊ stacking strength test နှင့် pressure standard test။ကိရိယာသည် တင်သွင်းလာသော ဆာဗာမော်တာနှင့် ယာဉ်မောင်း၊ ကြီးမားသော LCD ထိတွေ့မျက်နှာပြင်၊ တိကျမှုမြင့်မားသော အာရုံခံကိရိယာ၊ ချစ်ပ်ပြားကွန်ပြူတာ၊ ပရင်တာနှင့် အခြားပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပအဆင့်မြင့်အစိတ်အပိုင်းများ၊ အဆင်ပြေသောအမြန်နှုန်းစည်းမျဉ်း၊ ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှု၊ မြင့်မားသောတိုင်းတာမှုတိကျမှု၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ပြီးပြည့်စုံသော၊ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် အခြားလက္ခဏာများ။ဤကိရိယာသည် ကြီးမားသော လျှပ်စစ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်စမ်းသပ်မှုစနစ်၊ မြင့်မားသော ယုံကြည်စိတ်ချရမှု လိုအပ်ချက်များ၊ မျိုးစုံသော အကာအကွယ်စနစ် (ဆော့ဖ်ဝဲကာကွယ်ရေးနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲကာကွယ်ရေး) ၏ ဒီဇိုင်းသည် စနစ်အား ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ပိုမိုလုံခြုံစေသည်။
တင်ချိန်- စက်တင်ဘာ ၂၂-၂၀၂၁